Vuelio: ny sehatry ny fifandraisan'ny haino aman-jery sy ny fifandraisana | Martech Zone
Talata, Septambra 8, 2020 Talata, Septambra 8, 2020 Douglas Karr
Niova tanteraka ny fifandraisam-bahoaka tamin'ny fipoahan'ny haino aman-jery tamin'ny vanim-potoana niomerika. Tsy ampy intsony ny mametraka outlet vitsivitsy ary manangona lisitr'ireo fanamarihana isam-bolana momba ny marikao. Androany, ny matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny olona maoderina dia tsy maintsy mandray an-tsoratra lisitra mpanentana sy famoahana tsy mitsaha-mitombo, avy eo manaporofo ny fiantraikan'izy ireo amin'ny marika iray.
Ny rindrambaiko PR dia nivoatra avy amin'ny fizarana gazety an-gazety tsotra ho an'ny rafi-pitantanana fifandraisana maoderina izay afaka manampy amin'ny fikarohana matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe, mahita, mifampiresaka, mandeha ho azy ary mandrefy ny fiantraikan'izy ireo amin'ny anaran'ny mpanjifany.
Vuelio dia sehatry ny rindrambaiko PR izay mandrakotra ireo lafiny rehetra amin'ny fifandraisana maoderina ireo. Fantaro hoe iza no zava-dehibe, ny fomba fampandraisana anjara azy ireo tsara indrindra avy eo handefasana atiny, hanaraha-maso ny valiny, handrefesana ny fiatraikan'ny haino aman-jery sosialy, ary hamakafaka ny fahombiazany, amin'ny toerana iray.
Ampidiro ao ny endri-javatra Vuelio
Media Database - Tsindrio ny lisitry ny haino aman-jery mahery vaika an'ny indostrian'ny PR. Amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana amin'ireo mpanao gazety mihoatra ny iray tapitrisa sy ny influencer avy amin'ny firenena efa ho 200 dia afaka mifandray amin'ireo olona manandanja indrindra amin'ny tantaranao, ny lohahevitrao na ny fandaminanao.
Fanaraha-maso ny media - Fantaro ny fandraisan'ny mpanao gazety sy ny influencer ny tantaranao amin'ny alàlan'ny fitaovana fihainoana sy fanombanana. Ny fanaraha-maso dia ahafahanao manohy mamaky vaovao sy fandrakofana manerana ny haino aman-jery fampielezana, fanontana, an-tserasera ary media sosialy.
Vaovao momba ny famoahana ny fizarana - Ataovy mora amin'ny olona izany resakao izany. Alefaso mivantana any amin'ny tariby, sosialy, motera fikarohana na tranokalanao ireo tantara multimedia. Araho, diniho, ary mianara amin'ny valiny amin'ny fotoana tena izy.
Fanadihadiana momba ny haino aman-jery - Fakafakao ny fomba nandraisana ny tantaranao ary mahazoa fahitana azo ampiharina hanatsara kokoa ny serasera amin'ny ho avy. Jereo hoe iza ny hafatra, atiny ary fantsona miasa (ary iza no tsy) amin'ireo mpanao gazety sy mpanentana anao lehibe. Mahazoa hevi-baovao amin'ny fomba hahatratrarana ny mpihaino anao amin'ny fomba mahomby kokoa, hanamafisana ny ROI, ary hanatsarana ny lazan'ny marika.
Efitra fanaovana gazety an-tserasera - Ataovy mora omena ny mpanao gazety, ny mpandray anjara ary ny influencer ao amin'ny foibe haino aman-jery an-tserasera. Mamoaha haingana ny fanambarana an-gazety, ny sary ary ny fampahalalana manohana raha miditra amin'ny angona ilainao ianao hanatsarana ny fahombiazan'ny zavatra rehetra noforoninao.
lamba - Mamorona fampisehoana an-tsary tsara ho an'ny mpiray antoka aminao momba ny nitaterana ny tantaranao tao anatin'ny segondra. Fandrakofana vaovao, hetsika sosialy, horonantsary ary rakipeo mba hananganana seho fampielezan-kevitra manaitra ao anatin'ny segondra.
FOI Management - Mitantana mora foana ny fizotry ny fahalalahan'ny fahalalanao. Araho ny fe-potoana farany, ny statistikan'ny fanodinana ary manaova tatitra haingana momba ny isa sy ny karazana fangatahana, araka ny notakin'ny lalàna FOI 2000.
Fitantanana ny tompon'andraikitra - Tantano ireo fifandraisana manan-danja amin'ny ivon-toerana fitantanana fifandraisana tsotra. Ataovy izay hifaneraseran'ny mpampita vaovao amin'ny mpanao gazety sy ny mpitarika ao amin'ny ekipanao amin'ny alàlan'ny fananana foibe an-tserasera afovoany izay manome antsipiriany ny fifandraisan'ny ekipanao sy ny mpiray antoka aminao.
Fitantanana fifandraisana amin'ny haino aman-jery - Ampifanaraho amin'ny foibem-panentanana afovoany ny paikadim-pifandraisanao rehetra. Ny rindrambaiko fitantanana haino aman-jery Vuelia dia mamonjy fotoana betsaka amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fandaminana, ny fizarana ary ny fitaterana izay rehetra ataon'ny ekipanao, amin'ny alàlan'ny fanarahana mandeha ho azy, ny fampidirana mailaka ary ny fanaovana tatitra farany sy fitaovana famakafakana.
Mifandraisa amin'i Vuelio raha mila vidiny sy fampahalalana
Tags: fahalalaham-baovaotahiry mediafanaraha-maso ny haino aman-jeryfitantanana fifandraisana amin'ny haino aman-jeryfizarana vaovaofizarana vaovaoefitrano fampahalalam-baovao an-tseraseralampihazosehatra prfizarana gazetyrindrambaiko fifandraisam-bahoakafitantanana ny mpandray anjaravuelio